Shirarka sadexda Degmo lagu qabanayo maxay astaan u yihiin, Gaalkacyo,Qardho iyo Garoowe ???Bal adba!!!! | WARARKA PUNTLAND
Home Maqaal Shirarka sadexda Degmo lagu qabanayo maxay astaan u yihiin, Gaalkacyo,Qardho iyo Garoowe...
Shirarka sadexda Degmo lagu qabanayo maxay astaan u yihiin, Gaalkacyo,Qardho iyo Garoowe ???Bal adba!!!!
Waxaa magaalada Gaalkacyo ka furmaya shirweyne loogu magac daray shirweynaha Wadatashiga Puntland oo markii hore hal weji in lagu qabto ahaa balse sadexda walaalaha khilaaf ka yimi kadib la go’aansaday in loo kala qeybiyo deegaanada Gaalkacyo, Qardho iyo Garoowe.
Shirkan ujeedadiisa ugu weyn waxay ahyed in looga hadlo awood qeybsiga Beelaha Puntland iyo cadaaladda in lagu saleeyo awooda Dowladda saami beeleedka loo qeybsado hab siman oo ku saleysan cadaalad.
Hadda wuxuu shirka yeeshay wajiyo badan oo isbarbar socda waxayna u muuqata in hab maaweelo iyo dhaqaale soo kordhin deegaanada lagu qabanayo loo asteeyey, waxayna ujeedadu tahay murdidii Soomaalida ee odhan jirtay “Eelka Ninkii dhigay u Ergootay” Dibaatooyinka Puntland ee Beelaha ka cabanayaan sow ma ahan kuwa dhigay kuwa la leeyahay cadaalad ha abuureen, taasi waa riyo maalin ah oo soo jeed dadka doonaya in wax isbedelaan ku riyoonayaan.
Isbedelada iyo Cadaaladda waxaa loo maraa habaab geesiyaal dirira oo u dagaalama waxa ay dhigooda ka tirsanayaan oo waxay u baahan tahay in xoog looga faramaroojiyo, Nin waxaanu laheyn haysta isii kaama yeelo ee waa inaad khasabtaa in aad ka qaado oo cadaaladda ku qotomiso.
Shirarka haddaba, Gaalkacyo, Qardho iyo Garoowe ka furmayaa waa kuwo dadka kale lagu
maaweelinayo oo aan wax xal la taaban karo ka soo bixi doonin marka uun laga reebo xoogaga dhaqaale ee magaalooyinkaas qeybsanayaan ee laga helayo Beesha Caalamka.
Ujeedada ugu weyn ee dadweynaha reer Puntland doonayaan waxay tahay in hab cadaalad ku dhisan awooda siyaasadeed iyo tan shaqo Beelaha Puntland u helaan oo aan eex iyo Nin jeclaysi ku dhisnaan habka dowladeed ee Puntland.
Waxaa Iminka muuqanaya in khataro badan laga muujinayo dhalinyarada beelaha gadoodsan ee ugu badan gobolka bari kuwaas oo xataa u bareeri kara qalalaase la mid ah kii USC muqdisho ka abuurtay markii kacaankii 21 October xukunka ku raagay oo 21 sanno jirsaday ee kooxahaas dhalinyarada USC xoog ku rideen. Taas waxaa la mid ah gadodka iyo kacdoomada Cadaalad doonka Puntland ee lagu doonayo in mar uun Xukunkan raagay ee 17-ka sanno jirsaday hab isbedel xoog ama xeelad la helo.
Beelaha kale reer Puntland waxay weli ku jiraan jahawareer iyo is-barbar yaac mugdi uu ku dahaaran yahay mustaqbalka liita ee aayaha puntland u mala awaalayaan hadaan wax uun isbedel ama rajo wanaagsan la helin waqti dhow oo Maamulka hadda jira talada waasicin wax badana aanay ku yeelan dadka hadda wareerka ku ah Puntland.
Waxaase loo balan sana yahay maalmaha soo socda ee fooda inagu soo haya shirkii kowaad wajigiisa ka furmi doona 25-ka bishan Magaalada Gaalkacyo, kaasoo ah mid kala baran oo dadkii loo kala qeybiyey sadex magaalo Qardho Garoowe iyo Gaalkacyo, waxayna filayaan dad badan in xataa ajandaha shirku uu yahay mid qoran oo ay soo dejiyeen sadexdaas magaalo rag ka kala socda oo heshiis ku ah in Puntland beelaha degan aanay horumar xagga hogaanka sare sameynin oo aanay hawaysan Hogaaminta Puntland.
Waxaa aad loo badinayaa in aan wax weyn oo la taaban karo shirkan soo kordhin doonin marka laga hadlayo, tabashooyinka Beelaha Puntland iyo in Cadaalad in la helo, waana tan loo saadalinayo inwax weyn aanu soo kordhin doonin shirka Gaalkacyo iyo kuwa magalooyinka la mataana ah lagu qaban doono ee Garoowe iyo Qardho wejiyada labaad iyo sadexaad.
This post has already been read 87924
Previous articleFaah faahin ka soo baxaysa weerar ismiidaamin ah oo maanta ka dhacay Magaalada Kismaayo (SAWIRRO)
Next articleFADEEXAD-Dhagayso: GAAS oo Cadeeyey inuu ku guuldaraystay Beekhaaminta Miisaaniyada Dawlada PL